Aluminium Mbiri yeindasitiri yefekitori, Vatengesi - China Aluminium Mbiri yevakagadziri Vemaindasitiri
FOEN T-slot aluminium extrusion profile system yakashanda kune muchina kuvaka, aluminium chimiso, otomatiki indasitiri, zvinhu kubata, bhandi rinosimudzira system uye muchina kuchengetedza kuchengetedza uye kuvhara. Modular aluminium zvimiro zvinopa yakakwirira shanduko uye mashandiro anosanganiswa nekuona kukwezva uye kuchena kweye anodized wepasi.
FOEN Aluminium ine yakakwira-tech yekuwedzera yekugadzira line.T5 yekurapa kupisa ndiyo sarudzo iri nyore kune zvigadzirwa zvedu.Iyo inogona kuve yakasikwa nemweya- yakatonhorera uye wozove wakura zvehunyanzvi pamhepo dzakanyanya kupisa.T6 Kupisa kupisa kuri kutonhorera nemvura inotonhora kuti isangane nezvinodiwa kuomarara. .
Professional timu kuona zvigadzirwa mhando
Yedu Kambani ine anopfuura makore makumi matatu emakore ruzivo rwealuminium extrusion profil uye isu tine 3500 vashandi vanosanganisira makumi mana nemakumi mairi nyanzvi uye yeinjiniya. vatengi vaiziva kambani yedu yemhando yepamusoro kurapwa kwepasi uye yaigara ichida kutenga zvigadzirwa zvedu. Yedu yekutengesa "FOEN Brand" yakapihwa zita rakakurumbira muChina.Zvigadzirwa zvedu zvinotengesa mushe mumusika uye zvinotengeswa kune dzimwe nyika kumusika.